Yintoni ephakanyisiweyo ngeenkonzo zeBentley kunye neWMS-Geofumed
NgoJuni, 2008 Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Iintsuku ezimbalwa ezedlule kwiforum yeCartesia uTomás ubuze malunga ne-Microstation kunye namathuba okudibanisa neenkonzo zeemephu (WMS)
Kwi-Bentley umgca ubuncinane izicelo ezintathu ezikuyo ngokwephepha le-OGC:
Lona sicelo se-client-server sokushicilela iinkonzo, efunda idatha kwiprojekti yeGeographics okanye kwi-Schema Bentley Imephu kwaye ibathumele njengeenkonzo. Unokudibanisa neenkonzo ze-ESRI kunye nesicelo esibizwa ngokuba ngumxhasi we-GIS kwaye usebenzise izicwangciso ze-MXD.
Kuba ixesha elithile yasebenza ye Java kumatshini onesiqhamo, neyavela 2004 ezabo izicelo zabo ekuthiwa VPR ActiveX (View, Print, redline)
Ngokwezinto ezishicilelwe kwiphepha le-OGC, umshicileli we-Geo Web usetyenzise imigangatho ye-WMS 1.1.1
Bentley Imephu XM
Le yinto ebizwa ngokuba yi-Microstation Geographics, kwaye iphumelele imigangatho ye-GML 2.1.2, GML 3.1.1, GMLsf 1.0.0, i-WFS (T) i1.0
Ngokomnye incoko endiyenayo noKeith Raymond, eBaltimore, i-Microstation ayinalo lolu hlobo lwezicelo (olubhalwe ngokusemthethweni) kwaye liya kuphunyezwa kwi-Microstation 8.11 eyaziwayo njengeAthens.
Ngokwenyani, umgangatho we-WMS 1.1.1 uvela kwikhasi le-OGC.
Ngendlela ephosakeleyo ebhalwe ngayo kungenziwa nangona imigangatho ingazange ivunyiwe yi-OGC ... ndiyazi ukuba ndiyazi ngale nto kwiforamu ye-AutoDesk
1 Ngomphathi weRaster
Oku kuseMenenja yeRaster, "kwiisethingi / Iiseva zeZithombe"
Ngethuba ngeli phepha, "kongeza" kukhethwe, kunye nenkonzo yongezwa, ukubonelela nge-alias kunye ne-DNS.
Emva koko igcinwa nge "fayile / ugcine" kwaye ngale ndlela ifayile yokucwangcisa kunye nokwandiswa .cfg igcinwa, yiyo leyo ezisa iinkonzo.
Oku kuyindlela yokufikelela kwiinkonzo zemifanekiso ezenziwe nge-Geo Web Publisher, thayipha i-pss enokuthi ibe yintengiso okanye i-raster.
Ukuyilayisha, "ifayile / ifakile" yenziwe, ngoko kwinguqulelo zangaphambili (V8.5) ulawulo kunye neefayile ezibonakalayo. Kwi-XM ibonakala ngasentla, ngasentla kwiintandokazi, oku kubonisa iinkonzo ezikhoyo.
2 Ukudala ifayile ye xml
Kule nto kufuneka wenze ifayile ye-txt, kunye nokwandiswa .xwms kunye neendawo ngaphakathi kwikhowudi ngokwemiqathango wms standard, umzekelo ukusuka kwi-Microsoft Terraserver, oku kuya kuba yikhowudi:
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8" standalone = "ewe"?>
<FORMAT> umfanekiso / jpeg </ FORMAT>
<MAXBITMAPSIZE ububanzi = "1024" height = "1024" />
Emva koko ukuyilayisha iyabizwa nje ngokuthi i-raster (ifayile / iqhotyoshelweyo), ukhetha uhlobo lweefayile xwms
Qaphela, oku kusebenza kwi-Microstation 8.9 okanye ngaphezulu, oku kuthetha ukuba ayifuni i-Bentley Imephu. Bafanele bazame, kuba xa beza kuyo kuvakalelwa ngokungathi umfanekiso wendawo wendawo ... wow!
UKeith, wamqamba amanga
Post edlulileyo«Edlulileyo Indlela iqela loyilo lwe-AutoDesk isebenza ngayo
Post Next Indlela yokwenza i-IMS kunye ne-GIS eninziOkulandelayo "
Iimpendulo ze-15 "Yintoni ephakanyisiweyo ngeenkonzo zeBentley kunye neWMS?"
Ewe, ndihamba ngentshonalanga ... kunemvula emininzi
Andiboni ukutshintsha kwiphepha lakho, ndiza kujonga xa ndibuyela kwisixhumano esamkelekileyo ... ezi ntshukumo ziyi ntlekele
Ngawaphi amaza user72, ejeejeje sele usubuyela njani? kunye nezi thundu zamanzi kunye nawe kwisitrato, kubika vooo, uyanyamekela ukubona ukuba sikuphi usuku esikubona ngalo lol ngoku ndikhululekile ... ngokukhawuleza ukuba ndikubize ngoku ngoku ndiwela ngaphaya apha jjeejej ubone ukuba sele ubone entsha ??? http://www.ecohonduras.net uzikhathalela ...
Hayi ukuba loo Arost ... Ndihamba
Ngawaphi amaza owenzayo ??? ushiyile, sikubona ...
Ku va ni xiphiqo xa inguqulelo J wathi yonke into ukuthatha V8, emva kokuba XM, emva kokuba Mozart, ngoku ukuba eAthene ...
iyonke isoloko kukho into eseleyo.
Ngendlela elula ngayo i-AutoCAD Civil (Imephu) yenza uxhulumaniso kwiWMS 🙄
Andiqondi ukuba iBentley ibe yiphi yokugqibela ukuphumeza iinkonzo ze-OGC.
Wena Unyanisile, loo nto ukusuka kuguqulelo 8, kwaye zeenkonzo okudalwe umvakalisi geoweb (PSS) ukuba ingaba imifanekiso okanye kumda wesangqa.
Inyani yile yokuba kwiinguqulelo zangaphambi kweXM, xa usenza "uncamathisele", kwindawo apho okukucwangciswa kweengcambu (C: D: E: :), ii-alius zemifanekiso ezenzelwe ukuvela ziyavela.
Kwimiyalezo ye-XM ibonakala kwikhonkco engenhla, kwiibini zentandokazi, kwaye yenza okufanayo.
Ekugqibeleni, oko kukushicilela iinkonzo ezenziwe nge-Geo Web Publisher ... okanye ngeProve Wisely, ndicinga ukuba
kunye nantoni na ukutshintsha ku-XM ... ndixelele ukuba ndiyakwenqaba ukuhamba ukusuka kwiiGographics ukuya kwiBentley Imephu.
... de ndaya kwi-BE, kwaye xa ndathetha ngeGeographics ndashiywe ndikhangele ngokungathi ndathi i-95 windows
Ndifumene isihloko esilandelayo kwiforamu yeBentley, kodwa ayinakongeza kwaye idibene kakhulu:
Ndibe ndizama ngeendlela ezahlukeneyo kwaye andiboni indlela yokwenza ngayo. Ndicinga ukuba olu khetho lunokusebenza kunye ne-Microstation 8.1. kwaye ndikhetha le nguqulo.
Hayi, ndingazi ukuba ndiyenze ntoni na.
Ndiya kufunda kwaye ndiza kukuxelela
Molo G!, Ukuba ulandela le nkqubo «1. Ngomlawuli weRaster », ukuchaza ii-alias zemifanekiso, ngaba yeyiphi indlela elayishwe kuyo kamva?
I-Microstation 8.9 yi-Microstation XM?